Hyperthyroidism and Fertility လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများရောဂါ နဲ့ သားသမီးရနိုင်ခြင်း – Mawlamyine Daily
Posted on August 29, 2018 by Mawlamyine Daily
Hyperthyroidism and Fertility လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများရောဂါ နဲ့ သားသမီးရနိုင်ခြင်း
မော်လမြိုင်၊ ၂၉ သြဂုတ် ၂၀၁၈
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါ ကျွန်မ အသက် ၂၃ နှစ်ပါ အပျိုပါရှင့် ရာသီမှန်ပါတယ် ၇ လပိုင်းတုန်းက ဆေးစစ်တာ လည်ပင်းသိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်ချက်မြန်တယ်လို့ပြောပါတယ် T4 များနေလို့တွေ့ပါတယ် TSH က normal ပါ ဆရာဝန်က ရောဂါမဖြစ်သေးတော့ ဆေးသောက်စရာမလိုဘူးလိူ့ပြောပါတယ်ရှင့် သုံးလနေရရင် တခါပြန်စစ်ပါလို့ ပြောထားပါတယ် မစိုးရိမ်ရဘူး လည်းပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအတွက် ဘာတွေ ဆောင်ရရှောင်ရမယ် မမေးခဲ့မိလို့ပါဆရာ ပြီးတော့ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလား ဖြေပေးပါဦးရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၂။ သမီးရဲ့အသက်က (၂၉) နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး (၆) လလောက်နေတော့ နှလုံးခုန်နှုန်းက အရမ်းမြန်တာနဲ့ ဆေးခန်း သွားပြတာ လည်ပင်းကြီးနေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ဟော်မုန်းအဆိပ် ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ သွေးစစ်ပြီး Cazole ဆေးကို သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးသောက်နေတာ ယခုဆိုရင် ၁ နှစ်၇ လရှိပါပြီ။ TSH ကိုတော့ (၆) လ (၁) ကြိမ်လောက် စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးစစ်တာ (၄) ခါရှိပါပြီ။ ရောဂါစဖြစ်ကနေ (၃) ခါ စစ်တာတော့ အဖြေက (TSH > 0.05) နဲ့ ထွက်ပြီး နောက်စစ်တဲ့ အဖြေမှာတော့ (TSH 0.025) နဲ့ထွက်ပါတယ်။ ကလေးလည်း လိုချင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်က (၂) နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ရောဂါမြန်မြန်ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။ ရောဂါဖြစ်နေရက်နဲ့ ကလေးယူရင် ကလေးမှာ တခုခုဖြစ်မှာကို နှစ်ယောက်လုံး စိုးရိမ်မိပါတယ်။
Hyperthyroidism လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများရောဂါကို Toxic goiter လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းအဆိပ်ဖြစ်တာလို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၅-၁ဝ ဆ ပိုဖြစ်ကြတယ်။ ရောဂါသေခြာအောင် –
• Physical exam ဆေးစစ်မယ်၊
• Thyroid ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်မယ်၊
• Blood tests သွေးစစ်မယ် –
1. TSH: the initial screening test
2. T4: the thyroid hormone
3. T3:asecond thyroid hormone, of value before treatments start
4. TRAb: Thyroid receptor antibodies
Hyperthyroidism လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများရောဂါမှာ Thyroxine (T4) နဲ့ Triiodothyronine (T3) တွေကနေ Metabolic rate ကို များစေတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာအလုပ်မှန်သမျှ အပိုလုပ်နောတာကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ T4 နဲ့ T3 ကို ဦးနှောက်ထဲက Pituitary gland (ပစ်ကျူထရီ) အကျိတ်ကနေ ထုတ်ပေးနေတဲ့ Thyroid-stimulating hormone (TSH) က ထိန်းချုပ်နေတယ်။ T4 and T3 များနေရင် TSH က နည်းနေမယ်။ Pituitary gland tumour (ပစ်ကျူထရီ) ကင်ဆာ ကြောင့်လဲ Secondary hyperthyroidism နောက်ဆက်တွဲ လာဖြစ်နိုင်တယ်။
လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း များစေတဲ့ နောက်အကြောင်းတမျိုးကတော့ Toxic nodular goiter (တောက်ဆစ်-နိုဒူလာ-ဂွိုက်တာ) ခေါ်တယ်။ လည်ပင်းအကျိတ်ရောင်တာ ဖြစ်ရင် Thyroiditis (သိုင်ရွိုက်ဒိုက်တစ်) ခေါ်တယ်။ ဟော်မုန်းတွေ ပိုထုတ်နေမယ်။ ၂-၃ ပတ်ကြာတယ်။ နာတာရှည်ဖြစ်ရင် Hypothyroidism (ဟိုက်ပို-သိုင်းရွိုက်ဒဇင်) ပြောင်းပြန် ဖြစ်လာမယ်။
Hyperthyroidism ရောဂါလက္ခဏာတွေ နဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တာတွေ –
• နှလုံးခုန်မြန်၊ နှလုံးခုန် မမှန်၊
• ကိုယ်အပူချိန်များ၊ ချွေးထွက်များ၊
• ဂနာမငြိမ်ဖြစ်၊ လက်တုန်၊
• မောပန်းနေပါစေ လုပ်တာကိုင်တာမှန်သမျှ တက်ကြွနေ၊
• အစားပိုစား၊ လူကပိန်၊
• အိပ်ရေးပျက်၊ ဝမ်းပျက်၊
• မျက်လုံးမို့၊ မျက်ရည်များ၊ ကြည့်ရင်စိုက်ကြည့်၊
• အရိုးအားနည်း၊ လည်ပင်းကြီး၊
ဒီလက္ခဏာတွေက အသက်သိပ်ကြီးသူတွေမှာ နည်းနည်းသာ ခံစားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျ၊ အသိဥာဏ်-မှတ်ဥာဏ်နည်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်၊ မူးမေ့ချင်၊ အားယုတ်၊ ဒါမှမဟုတ် နှလုံးရောဂါတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ အသက်ကြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ Thyroid receptor antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) များနေတာကို Graves disease (ဂရေ့ဖ်) ရောဂါလို့ ခေါ်တယ်။ Immune system ရောဂါပြီးစနစ်ကနေ TSH နဲ့တူတဲ့ Abnormal antibody ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) ထုတ်လို့ ဖြစ်လာတယ်။ လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများသူ ၈ဝ% မှာ (ဂရေ့ဖ်) ရောဂါဖြစ်တယ်။ မျက်စိပြူးတာဖြစ်တယ်။ အရေပြားလဲ ထူထဲလာနိုင်တယ်။
သိပ်ရှားရှားပါးပါးဖြစ်တတ်တဲ့ Thyroid storm ဟော်မုန်း မုန်တိုင်းထန်တာ ဖြစ်နေရင်တော့ မကောင်းဘူး။ ၂ ယောက် ၁ ယောက် အသက်ကို ရန်ရှာခံရတယ်။ အမျိုးသမီးဆိုရင် Pneumonia နူမိုးနီးယား နဲ့ Ovarian hyperstimlation မျိုးဥအိမ် အလုပ်ပိုလုပ်ခြင်း ဆိုတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများရောဂါမှာ တခြားရောဂါလက္ခဏာတွေအပြင် မျိုးပွါးလမ်းကြောင်းကိုလဲ သက်ရောက်စေတယ်။
• Irregular cycles ရာသီ မမှန်တာ နဲ့ Missed periods ရာသီမလာတာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Anovulation မျိုးဥမထွက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Ovulation Prediction Kit သုံးပြီး မျိုးဥ ထွက်-မထွက် စစ်နိုင်တယ်။ မထွက်ရင်လဲ ထွက်အောင်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိသူ အမျိုးသမီးတိုင်းက ကလေးမရဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါ။
• ဒီရောဂါကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေမှ သိသူတွေလဲရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ထဲကကလေးကို ၅% ပြဿနာဖြစ်စေတယ်။
• ကိုယ်ဝန် မဆောင်ခင် သိရင် Radioactive iodine ရေဒီယိုသတ္တိကြွဆေးပေးကုသတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁ဝ ပါတ် နောက်မှသိရရင် ဒီဆေးကုသနည်း မလုပ်သင့်ဘူး။ ကလေးကို ထိခိုက်စေမယ်။ သူတို့ကို Propylthiouracil (PTU) ဆေးပေးမယ်။ Celestone (Metamethasone) နဲ့ Hhyroidectomy ခွဲစိတ်နည်းလဲ လုပ်တယ်။ Methimazole ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ မပေးသင့်ဘူး။
• Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ၊ Preterm delivery စောမွေးတာ IUD သားအိမ်ထဲမှာတင် ကလေးသေသွားတာ၊ Pre-eclampsia ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်တာတွေ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ ဟော်မုန်းများနေတာကို ထိန်းထားနိုင်ရင် ကိုယ်ဝန်ကို ဒုက္ခမပေးပါ။
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ၊ ကုသမလဲ
• နှလုံးခုန်မြန်နေလို့ပေးတဲ့ Propanolol ဆေးဟာ ရောဂါအခြေခံကို ကုတာမဟုတ်ပါ။ နှလုံးခုန်တာ သက်သောနေစေမယ်။
• လည်ပင်းကြီးအကျိတ်က ဟော်မုန်းထုတ်နိုင်အောင် Iodine (အိုင်အိုဒင်း) ဓါတ်ဆား နည်းနည်း အမြဲ လိုနေတယ်။ များပြန်ရင်လဲ ဟော်မုန်းသိပ်ထုတ်မပေးပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် Iodine treatment (အိုင်အိုဒင်း) ဓါတ်ဆားပေး ကုသတာကို အမြဲမသုံးဘူး။ Thyroid storm လည်ပင်းကြီး မုန်တိုင်းထန်တာမျိုး ဖြစ်နေတာကို ချနိုင်အောင် ရေတိုသာ သုံးတယ်။
• Low levels of radioactive iodine ရေဒီယိုသတ္တိကြွ (အိုင်အိုဒင်း) သုံးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးမှာ မပေးပါ။ ပေးတာ များသွားပြန်ရင်လဲ ပြောင်းပြန်ဖြစ်မယ်။ အဲလို Hypothyroidism ဟော်မုန်းနည်းရောဂါ ဖြစ်ရင်တော့ Thyroid hormone replacement ဟော်မုန်း အစားထိုးပေးနေရတော့မယ်။
• Propylthiouracil နဲ့ Methimazole (Tapazole or Thiamazole or MMI) ဆေးတခုခုသုံးတယ်။ ၆ ပတ်ကနေ ၃ လအထိပေးလေ့ရှိတယ်။
• တချို့လူနာတွေကို Thyroidectomy ခွဲထုတ်ပေးတယ်။ ခွဲထုတ်သူတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ Thyroid hormone replacement ဟော်မုန်းအစားထိုးဆေး တသက်လုံး ပေးနေရတတ်တယ်။
• Cazole ဟာ Carbimazole ဖြစ်တယ်။ Neomercazole, Vidalta, Camazol စတဲ့နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။